DAAWO SAWIRRO: Al-Shabaab oo soo bandhigay weerarkii xerada Ceel-Saliini & saanado ay ka qaateen xeradaas | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Al-Shabaab oo soo bandhigay weerarkii xerada Ceel-Saliini & saanado ay...
Marka (Halqaran.com) – Warbaahinta Al-Shabaab ayaa waxa ay soo bandhigeen weerar shalay subax ay ku qaadeen Xerada Ciidamada Militariga ee deegaanka Ceel Saliini duleedka Magaalada Marka, halkaasi oo gaari qarax ah xerada ay ku dhufteen kadibna ay gudaha u galeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen 23- Askari oo ka tirsan Ciidamada Militariga dowladda Federalka Somaliya, balse arrintaasi waxaa beeniyay Saraakiisha Ciidamada Xoogga dalka.
Ururka Al-Shabaab ayaa soo bandhigay Sawirro muujinaya inay qabsadeen gudaha Xerada, sidoo kalena ay dileen qaar ka mid ah Ciidamadii ku sugnaa gudaha Xerada.
Warbaahinta ku hadasha Af-ka Al-Shabaab ayaa sidoo kale soo bandhigtay ciidanka Al-Shabaab oo saanad Militari ka dhex raranaya xerada dhexdeeda, islamarkaana guud ahaan xerada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab.
Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada noocaasi ah muuqaalada ay ka duubaan waxa ay soo bandhigi jireen muddo kadib, balse sababta ay u soo dadajiyeen soo bandhigida Sawirada ku saabsan weerarkaan waxa ay tahay in Saraakiisha Ciidamada dowladda ay beeniyeen Khasaare inuu ka soo gaaray weerarkaasi.
hub iyo gawaari
weerarkii xerada Ceel Saliini